Published June 11, 2020 at 5:49 PM CDT
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa sheegtay 10 dhimasho oo dheeraad ah oo ay ugu wacan tahay COVID-19 iyo in kabadan 330 xaaladood oo cusub muddo 24-saac gudaheed. Waxaa jiray dhimashada 639 iyo ku dhawaad 22,900 xaaladood oo wanaagsan.
Shaqaale muddo dheer ka shaqeynayey Cuntada Tyson ee Storm Lake ayaa u dhintey COVID-19.
Lix sano jir Ken Jones ayaa dhintay isbuucii hore ka dib markii uu ku dhawaad labo isbuuc ku sugnaa isbitaal.
Jones wuxuu ahaa shaqaale dayactir ka shaqeynayay warshadda muddo 12 sano ah.
Tyson ayaa shaaca ka qaaday usbuucii hore in ku dhawaad 600 oo shaqaale ah oo ku sugan warshada Storm Lake ay tijaabiyeen viruska in kabadan 2,300 oo la baaray. Waxaa jira afar dhimasho ah oo ka dhacday Gobolka Buena Vista iyo ku dhawaad 1,400 xaaladood oo togan.
Xoghayaha gobolka Iowa looma ogolaan doono inuu u diro codsiyada cod-bixinta waraaqaha cod-bixinta dhammaan cod-bixiyeyaasha diiwaangashan sida ku cad sharciga ay Arbacada u gudbiyeen Golaha Senate-ka Iowa.
Caadi ahaan, codbixiyayaashu waa inay codsadaan codsi codsi oo boostada ah ama ay ka helaan khadka tooska ah. Doorashadii koowaad ee Juun 2, Xoghayaha Arimaha Dibada ee Jamhuuriga Paul Pate wuxuu go'aansaday inuu u diro foomamka cod bixinta codbixinta dhammaan cod bixiyeyaasha diiwaangashan si kor loogu qaado cod bixinta boostada inta lagu guda jiro aafada coronavirus.
Iowa wuxuu dhammeystirey rikoor cusub oo loogu tala galay soo noqoshada doorashada koowaad ee gobolka.
Development Iowa Workforce Development ayaa soo weriyey Khamiista in inka badan 10,000 oo qof ay gudbiyeen sheegashooyin bilow ah usbuuca dhamaanaya Juun 6.
Taasi waxay isbarbar dhigaysaa in ka badan 6,900 qof oo soo gudbiyay asbuucii hore.
Tirada ugu badan ee sheegashooyinka waxay ka timid dadka ka shaqeeya wax soo saarka.
Abaabulayaasha Carwada Gobolka Woodbury waxay leeyihiin waxay qorsheynayaan inay yeeshaan 4-H Fair oo faahfaahinta wali laga wada hadlayaa. Waxay soo saareen bayaan ay ku sheegeen inay aad uga xun yihiin in la maqlo wararka Arbacada ee Go'aanka Cadaaladda ee Gobolka Iowa ee ah in dib loo dhigo caddaaladda sannadkan, hase yeeshe, way fahmeen go'aanka.
Local NewsLocalIowaWoodbury CountyNebraskaStorm LakeTyson FoodsnewsDakota CountyIowa Workforce DevelopmentIowa Department of Public HealthCOVID-19SomaliSputh Dakota
Hanti-dhowrka doorashada ka dib kama helin wax farqi ah oo ka dhashay natiijadii cod-bixinta ee Degmada Woodbury County ee la dheereystay intii lagu jiray…
Guddoomiyaha Gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu fududeynayaa xannibaado dheeri ah oo la dhigay si loo yareeyo faafitaanka coronavirus.Intii lagu guda jiray…